Al-shabaab oo sheegatay Mas’uuliyadda Qaraxii Ismiidaamin ahaa ee ka dhacay Isgoyska Hoteel Jubba |
Al-shabaab oo sheegatay Mas’uuliyadda Qaraxii Ismiidaamin ahaa ee ka dhacay Isgoyska Hoteel Jubba
Ugu yaraan shan qof oo shacab ah ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen, kaddib Qarax ismiidaamin ahaa oo Isgoyska Hoteel JUBBA ee Muqdisho ka dhacay maqribnimadii caawa, iyadoo Weerarkan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qaraxa lagu Qarxiyay maqaahi ay dad badan oo Rayid ahi ku sugnaayeen.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Somalia oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa xusay in weerarkan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo ku sugnaa maqaahi ay dad badan ku sugnaayeen oo ku dhow isgoyska Jubba.
“Illaa hadda waxaan haynnaa dhimashada shan qof oo shacab iyo toddoba qof oo kale oo ku dhaawacmay Qaraxa,” ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha ee Somalia, Maxamed Yuusuf oo Wariyeyaasha kula hadlay goobta uu Qaraxu ka dhacay.
Gaadiidka Gurmadka Deg-degga ah ee Ambulance-yada ayaa waxay goobta ka qaadayeen dadkii ku dhaawacmay Qaraxa iyo kuwii ku dhintay, iyadoo ciidammo badan ay goobtaas gaareen Qaraxa kaddib.
Ruux Goobjooge ah ayaa u sheegay Warbaahinta inay weli goobta yaallaan saddex qof oo mayd ah, kuwaasoo la garan la’yahay, ayna jiraan dad badan oo dhaawacyo qaba oo ay ka qaadeen goobta gaadiidka gurmadka deg-degga ah.
“Qaraxa waxaa loo adeegsaday Gaari Waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyay, waxaana ku sugnaa xilliga uu qaraxu dhacayay maqaahida dad badan oo shacab ah, waxaana arkay dad goobta ku dhintay iyo kuwo ku dhaawacmay,” ayuu yiri Goob-joogaha.
Waddada Isgoyska Jubba ayaa waxaa inta badan isticmaala gaadiid fara badan; kuwaasoo isugu jira Gaadiidka Shacabka iyo kuwa mas’uuliyiinta iyo Ciidamada Dowladda Somalia, iyadoo mas’uuliyadda weerarkan ay sheegatay Al-shabaab.
Qaraxan ayaa kusoo beegmaya Xilli uu saakay Qarax Is-miidaamin ahaa uu isna ka dhacay Jaamacadda Kismaayo oo ay ku tababaranayeen ciidammo kuwa Dowladda Soomaaliya ka tirsan, halkaasoo ay ku Geeriyoodeen in ka badan 10 Askari iyo kooxihii Weerarka ku soo qaaday saldhiggaas.